Dr. Gaas oo sheegay in dowlada Somalia ay dayacday dhegeysiga dhinacyada kasoo horjeeda… – Hagaag.com
Dr. Gaas oo sheegay in dowlada Somalia ay dayacday dhegeysiga dhinacyada kasoo horjeeda…
Posted on 13 Maajo 2018 by Admin in National // 0 Comments
Hoggaamiyaha Puntland Cabdiweli Gaas ayaa sheegay in Dowlada Somalia ay dayacday dhageysiga dhinacyada kasoo horjeeda ama kuwa dhaliilsan Siyaasadeeda islamarkasne aan isku fikirka aheyn.
Madaxweynae Cabdiweli Gaas, waxa uu sheegay in Madaxda ugu sareysa dalka laga doonaayo inay furaan dhagahooda, isla markaana dhageystaan wixii dhaliil ah ee loo jeedinaayo dowlada federaalka soomaaliya halke ay iska dhigi lahaayen kuwa kaliya saxan ayaga.
Sidoo kale Waxa uu Cabdiweli Gaas uu sheegay in Dowlada Somalia aysan dhageysan tallooyinka iyo dhaliilaha loo jeedinaayo, waxa uuna talaabada ceynkaasi ah ku sheegay mid ka fog Siyaasada iyo geedi socodka federaaleynta”.
‘’Wey adag tahay inuu imaado Isfahan marba haddii aanu jirin tallo kala qaadasho iyo dhageysiga haddii ay jiraan dhaliilo loo qabo Dowlada, anigu ma arag Dowlada oo qaadaneysa dhaliisheeda waxaan qabaa in dowladu ay bedesho Siyaasada ay ku dhaqeyso dalka’’.
Gaas, waxa uu tilmaamay in Madaxda dowlada laga doonaayo jilicsanaan iyo wada shaqeyn ay la yeeshaan dhammaan dhinacyada ku mideysan Siyaasada dalka iyo kuwa dhaliisha muujinaaya, waxa uuna meesha ka saaray inuu jiro wada shaqeyn.
Wuxuuna hadalkaan ka sheegay kulan uu magaalada Garoowe kula qaadanaayay mas’uuliyiin iyo Siyaasiyiin dhowr ah, waxa uuna arrintaani ku keenay su’aal laga weydiiyay sida uu xiligaan yahay xiriirka dowlada Somalia kala dhexeeya dhinacyada kale ee Siyaasada qeybta ka ah.
Si kastaba ha ahaatee, Hadalka Cabdiweli Gaas, ayaa kusoo beegmaaya xili uu dowlada Somalia khilaaf kala dhexeeyo Maamulada Puntland iyo Jubbaland waana caqabado hor yaalo dowlada federaalka soomaaliya sida la ogyahay maamuladaan diidan Siyaasada dowlada dhexe ee wax ku hogaamineyso lama oga xiliga uu dhamaan doono khilaafka sii kordhaya.